Barwaaqo's Content - Page 8 - Somali Forum - Somalia Online
Odaygani waa rug cadaa Wadani dhab ah. Waxaan u arkaa hadalkiisa waano iyo runta jirta. Kuwa aan aqoon dhaqanka Landerska ama afsomaligu ku yar yahay hadalkiisa waxay moodayaan inuu u daran yahay Somaliland. Waa hadal ku salaysan taariikh iyo wacyi galin, una danaynaya Jamhuuriyadda barakaysan.
Chief Jawar Mohammed
The weapons captured from east Burco community by the Bohol/Ceel Afweyn community
A binding Peace Agreement signed in Ceel Afwayn
Somaliland president Muse BIixi cabdi to visit borama
Burcaawi Asali ah baan ahay oo hadalku wuxuu noogu soo dhacaa si hawl yar. Waa kalgacal-cun iyo dhiiri-galin; cabashana kama madhna Dee.
Ethiopian forces take over Jigjiga regional gov't buildings
Hadii ceel Wal-waaleed ku dhacaan wadaamuhu Waan-waani dhacantoo wadnaha ayaan far ku hayaa! Rabbi yasir.
Barwaaqo replied to Miskiin-Macruuf-Aqiyaar's topic in Politics
100% agree. Isagaa dhabarku daali doonaa!
Welcome back Dr. Oodweyne, Gacal ku arag.
Allow noo adkee nabadaa Culimaddu noo xidhay. Amiin.
Burburkii Qaranimada Soomaaliya
Somaliyi haday doonayso in aan taariikhda la jaahwareerin waa in kuwa taariikhda qaloocinaya layska qabtaa si taariikhda dhabta ah wax looga barto oo aan dib loogu gelin khaladkii dhacay , xitaa haday Mur ka khadhaadhahay! Maxaa Jilalka yaryar been loogu canqarinaya? Kan hadlayaa waa Beenaale taariikhdda ku gefey! Siyaad Bare oo Villa Somalia ku dhex jira oo dagaalamaya ayaa ciidamadii qabiil u kala Jabeen. Ma jirin ciidan meel Amar ka qaata Koonfurta nin waliba qabiilkiisii buu raacay. Goboladii Waqooyina ciidankii joogay iyagu awalba go’doonka bay ahaayeen oo SNM baa dagaal khadhaadh kula jirtay, marka laga reebo Berbera iyo Airport Hargeisa dhamaan magaalooyinka waaweyn SNM baa ka talinaysay. Waxaan kula talinayaa in dhalinyaradda xaqiiqdda ogaato oo doonaan dhacdooyinkii dhabta ahaa. Dadkii joogay baa wali nool ayaan taariikh been ah laydiin qorin , dalku 1991 mar kaliya iskama dumin wakhti dheer oo laga soo billabo 1978 ayaa burbur soo socday , hadalkii Cumar Cartana saamayn muu yeelan. Mar dadkii qori wada qaatay oo talo faro ka haaday oo koox waliba inay iyagu taliyaan oo nidaamkii burburay ayaa dawladii dhacday. Qaranimadda wariyahani sheegayo ma daaraha iyo xafiisyadda aan dumin buu moodayaa , dalkuba qori iyo dagaal buu xukunkii dumay ka dhaxlay’e.
Heavy fighting breaks out in Ceeryaan, Somaliland region of Somalia
War @Saalaxka nixiyey.
Ciidamada Kenya oo Haween Soomaaliyeed ku Kufsaday Gobolka Gedo
Cidina ma reportgarayn jirin ee awalba tacadigu wuu ku dhici jiray dumarka Somaliyeed. Ma Gudhuu qurayshtii Africa oo dayacan heshay baa daynaysa. Ninka dalkaaga haystaa siduu doono ayuu ka yeeli., yaa ka celinaya tacadiga uu dumarka u gaysanayo?
Faysal Cali Waraabe is to be jailed after arrival
Barwaaqo replied to Deeq A.'s topic in Politics
Sharcigeenna meela kagama taalo yaan Walaweyn la salaamin. Faysal waa Xariif Wuxuu ogtahay In magaca Walaweyn aan xasaasiyad laga qabin salaantoodda.
Ethiopian & Eritrean leaders dine & wined by Gulf states
Aar Farmaajo u geeya clipkan.
Haa Somalia waan u duceeyaa oo Waxaan ugu duceeyaa Allow xaqa tus oo kuwa awrkoodda ku kacsanaya ee kaare Ethopian iyo Kukuuyo ku qabsanaya ka qabo, dhamaantoodna danahoodda iyo dalkoodda ku hanuuni. Allow shanta madaxweyne ee is barbar orda ka qabo oo u samee Madaxweyne keliya.
Ina Camay inaan Garoowe Difaacno ayuu noo kaxeeyey, taana DIIDNAY
Barwaaqo posted a topic in Politics
Peace Conference in Ceel-Afwayn
Xaajiyoow ma inaan “intii dux leh duxaansato” loox dheer wax ugu qoro baad doonaysaa? Oon ka bilaabo naacawdaa aad ku naaloonayso ee xagga barigga kaaga timaadda.
Shigudoonka shirka oo la magacaabay
Maxaa kaa lilaahi ah?
Dawladda Diin- Siyaasadeeya
Minoo la yaabo ‘Yaasiinka’